नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : जीरा पानीले २० दिनमै तपाईको तौल घटाउछ !
जीरा पानीले २० दिनमै तपाईको तौल घटाउछ !
जीरा तौल घटाउनको लागि चमत्कारिक तौल घटाउने पेय पदार्थको रुपमा लिइन्छ । विहान खाली पेटमा जीरा पानी पिउँदा मेटाबोलिज्ममा हुने सुस्तता, पाचन प्रक्रियामा भएको गडबडी, इन्सुलिनमा हुने प्रतिरोधको रक्षा जस्ता समस्याको समाधान हुने विज्ञहरु बताउँछन् । यदि तपाई यस्ता समस्या, पेट बढ्ने जस्ता समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने २० दिनसम्म जीरा पानी नियमित खानुपर्छ ।